atao manoloana ny olana samihafa sedrain’ny CAF amin’izao fotoana izao. Isan’ny voatohintohina i Ahmad filohan’ny CAF, izay tratry ny fanadihadian’ny polisy tao Frantsa ny 7 jona teo noho ilay raharaha fanapahana fiaraha-miasa tamin’ny orinasa Alema Puma sy nifanarahana tamina orinasa Frantsay, izay efa nilamindamina. I Ahmad tenany no nanolo-kevitra an’io “audit” io nandritra ny fivoriana notarihiny tao Le Caire Egypte ny 19 jona lasa teo, izay neken’ny komity mpanatanteraky ny CAF avy hatrany mba hahafahana miroso amin’ny fanatsarana sy ny fitantanana mangarahara sy mahomby. Hiandraikitra io “audit” io, izay hatao haingana io ny Sekretera Jeneralin’ny FIFA Rtoa Fatma Samoura, izay nomena andraikitra ho delege jeneralin’ny Fifa misahana an’i Afrika mandritra ny 6 volana azo havaozina manomboka ny 01 aogositra. Tsy dia mankasitraka an’io ny filohan’ny UEFA Aleksander Kaferin, izay maneho tsy fifanarahan’izany amin’ny satan’ny FIFA izay ny Sekretera jeneraly no halefa hanara-maso Kaonfederasionina ary misy ny fifampitsabahana andraikitra ankoatra ny fahatsapany ny karazana andraikitra atangorona amin’i Fatma Samoura. Efa Solontenan’ny PNUD teto Madagasikara nandritra ny fitondrana tetezamita izy ary misy milaza fa namana akaikin’i Ahmad.Tantara mitohy ity resaka ity !